Solon'ny TeamViewer ho fanampiana lavitra 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Solon'ny TeamViewer hahazoana fanampiana lavitra
TeamViewer dia tsy isalasalana fa ny programa fanampiana lavitra be mpampiasa indrindra eran'izao tontolo izao, noho ny fahombiazany miavaka amin'ny toetoetran'ny tambajotra rehetra (na dia amin'ny tambajotra ADSL miadana aza dia miasa tsy misy olana) ary misaotra ireo fiasa maro hafa toy ny famindrana rakitra lavitra. ary fanavaozana lavitra avy hatrany (ilaina amin'ny fanavaozana ny programa na dia amin'ny PC an'ny mpampiasa vao manomboka aza). Mampalahelo anefa fa ny Fampivoarana maimaim-poana an'ny TeamViewer manana fetra lehibe ianao: tsy azo atao ny mampiasa azy amin'ny sehatry ny varotra, anaovana fanamarinana karazana fifandraisana (hanamarinana raha mpampiasa tsy miankina izahay) ary tsy azo atao ny mampihetsika ny videoconferansa na ny mpanonta lavitra raha tsy mampihetsika ny fahazoan-dàlan'ny mpampiasa.
Raha te-hanolotra fanampiana lavitra na hanampy ny orinasanay izahay nefa tsy mila mandoa vola, dia hasehonay anao amin'ity torolàlana ity ny ireo safidy tsara indrindra ho an'ny TeamViewer ho fanampiana lavitra, mba hahafahanao mifehy ny solosaina rehetra lavitra tsy misy fotoana na fe-potoana.
VAKIO IHANY: Fandefasana birao lavitra hampifandray lavitra amin'ny solosaina
Solony tsara indrindra amin'ny TeamViewer
Ny serivisy izay hasehonay anao dia azo ampiasaina amin'ny faritra rehetra, ao anatin'izany ny matihanina: avy eo isika dia afaka mifehy ny PC lavitra ary manome fanampiana ara-teknika nefa tsy mila mandoa euro. Ireo serivisy ireo dia misy fetrany ihany koa (indrindra amin'ny endri-javatra mandroso) fa tsy misy mahasakana ny fanohanana. Ho an'ny fanamorana dia tsy hampiseho aminao afa-tsy ny serivisy aseho izahay tsotra toy ny configure ho TeamViewer na ho an'ireo mpampiasa tsy dia za-draharaha aza (amin'ity fomba fijery ity, ny TeamViewer dia mbola mpitarika ny indostria ihany).
Desktop lavitra an'ny Chrome
Ny safidy tsara indrindra TeamViewer azonao ampiasaina dieny izao dia Desktop lavitra an'ny Chrome, azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampidinana ny Google Chrome amin'ny PC rehetra ary ny fametrahana ny mpizara roa (amin'ny PC ho fehezina) ary ny ampahan'ny mpanjifa (amin'ny PC izay hanomezanay fanampiana).
Azontsika atao ny manamboatra haingana ny fanampiana lavitra amin'ny Chrome Remote Desktop amin'ny alàlan'ny fametrahana ny add-on browser (manokatra ny tranokala izahay ary manery Apetaho amin'ny pc), maka tahaka ny kaody tokana namboarina ho an'ity ekipa ity ary, mitondra anay any amin'ny pejin'ny mpanjifa ao amin'ny ekipanay, miditra ny kaody. Amin'ny faran'ny fanamboarana dia afaka manamarina ny birao izahay hanomezana fanampiana haingana sy haingana! Azontsika atao ihany koa ny mametraka ny singa mpizara amin'ny PC maro ary hitahiry azy ireo ao amin'ny pejin-tsoratray amin'ny anarana samy hafa, mba hahafahantsika mifehy solosaina roa na maromaro tsy misy olana. Chrome Remote Desktop dia azo ampiasaina amin'ny finday avo lenta, toy ny hita ao amin'ny torolàlana Desktop Remote Chrome amin'ny finday (Android sy iPhone).
Birao lavitra Iperius
Downloader maimaimpoana hafa hanome fanampiana lavitra dia Birao lavitra Iperius, azo alaina ho hany rindrambaiko ao amin'ny pejy fisintomana ofisialy.
Azo alefa aza ity programa ity, alefaso fotsiny ilay azo ampiharina mba ho vonona hampiasa ny mpizara sy ny mpanjifa avy hatrany. Mba hanaovana ilay fifandraisana lavitra dia atombohy ny programa amin'ny PC hifehy, misafidiana teny miafina tsotra amin'ny saha mitovy anarana aminy, adikao na avelanay izahay hilaza aminao ny kaody isa misy eo an-tampony ary ampidiro ao amin'ny Iperius Remote Desktop nanomboka tamin'ny solo-sainay. eo ambanin'ny lohateny ID hifandray; Ankehitriny dia tsindrio ny bokotra Connect ary ampidiro ny teny miafina, hahafahana mifehy lavitra ny birao ary manome ny fanampiana ilaina. Ny programa dia ahafahantsika mitadidy ireo karama izay ampifandraisintsika ary manolotra ireo safidy fidirana tsy arahi-maso (misafidy ny tenimiafin'ny fidirana mialoha): amin'ity fomba ity dia ampy ny manomboka ny programa amin'ny fanombohana mandeha ho azy hanolotra fanampiana eo noho eo.
Fanohanana haingana avy amin'i Microsoft
Raha manana PC misy Windows 10 isika dia afaka manararaotra ilay fampiharana ihany koa Fanampiana haingana, azo jerena ao amin'ny menio Start eo ambany ankavia (tadiavo fotsiny ny anarana).
Ny fampiasana an'io fitaovana io dia tena tsotra tokoa: manokatra ny rindrambaiko amin'ny solosainantsika isika, manindry Manampy olon-kafa, miditra amin'ny kaonty Microsoft (raha tsy manana izy dia afaka mamorona iray amin'ny sidina maimaimpoana), ary manamarika ny kaody mitondra omena. Andao izao handeha any amin'ny solosain'ilay olona hanatrika anao, sokafy ny app Quick Assistance ary ampidiro ny kaody mpandraharaha: amin'ity fomba ity dia hofehezintsika tanteraka ny birao ary afaka manome karazana fanampiana, tsy misy fetr'andro. Ity fomba ity dia manambatra ny hafainganan'ny RDP amin'ny fanamorana ny TeamViewer, manao azy ho fitaovana natolotry Navigaweb.net.
Raha manana solosaina be dia be isika miaraka amin'ny rafitra fiasa samihafa hifehezana lavitra, ny vahaolana tokana malalaka sy malalaka malalaka azontsika alain-tahaka dia ny DWService, azo alamina mivantana avy amin'ny tranonkala ofisialy.
Ity serivisy ity dia azo ampiasaina mivantana avy amin'ny browser, farafaharatsiny ho an'ireo izay manome fanampiana. Raha hanohy dia misintona ny DWAgent amin'ny solosaina (na solosaina) hanampiana azy, atombohy miaraka amin'ny PC ary soraty ny ID sy ny teny miafina ilaina amin'ny fifandraisana; andao isika handeha any amin'ny solosaintsika, ndao hamorona kaonty maimaim-poana amin'ny tranokala hitanao etsy ambony ary ampidiro ny solosaina amin'ny alàlan'ny ID sy teny miafina. Manomboka izao dia afaka manome fanampiana izahay amin'ny alàlan'ny fanokafana ireo mpitety tranokala ary miditra ao amin'ny kaontinay, izay hiseho ireo solosaina azo fehezina lavitra. Koa satria ny mpizara dia azo apetraka amin'ny Windows, Mac ary Linux DWService no safidy tsara indrindra ho an'ireo orinasa lehibe na ho an'ireo izay manana solosaina maro.
Raha te-hanome fanampiana tsotra lavitra ho an'ny namana na fianakaviana isika dia afaka mampiasa ny serivisy atolotra azy koa UltraViewer, azo idirana avy amin'ny tranonkala ofisialy.
Azontsika atao ny mihevitra an'io serivisy io ho iray TeamViewer lite kinova, satria manana interface mitovy sy fomba fampiraisana tsy mitovy. Raha hampiasa azy io, raha ny marina, dia ampy ny manomboka azy amin'ny solosaina hifehezana, handika ny ID sy ny teny miafina ary mampiditra azy ao amin'ny interface program amin'ny solo-sain'ilay mpanampy, hahafahanao mifehy ny birao lavitra amin'ny fomba mivaingana ary tsy misy dokam-barotra amin'ny dokam-barotra na fanasana hivadika ho Pro Version (fatra voafetra ao amin'ny TeamViewer).
Tsy misy tsy fahampian'ny alternatives mankany amin'ny TeamViewer ary mora ihany koa ny mampiasa sy manamboatra azy ireo, eny fa na dia ho an'ireo mpampiasa vao manana an'ity karazana rindrambaiko ity aza (raha ny marina, ampitao fotsiny ny ID sy ny tenimiafinao amin'ilay mpanampy lavitra anay). Ny serivisy nasehonay anao dia azo ampiasaina amin'ny tontolo matihanina (afa-tsy UltraViewer, izay maimaimpoana ho an'ny fampiasanao manokana irery ihany), manome safidy azo antoka ho an'ny fahazoan-dàlana TeamViewer lafo vidy.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny programa fanampiana lavitra dia manasa anao izahay hamaky ny torolalana Ahoana ny fomba famadihana ny PC lavitra mba hiasa lavitra mi Ahoana ny fomba hifehezana solosaina amin'ny Internet amin'ny lavitra.
Raha te hifehy lavitra ny Mac na MacBook isika dia afaka mamaky ny lahatsoratray Ahoana ny fomba hifehezana ny efijery Mac amin'ny lavitra.
Mampiasà mpandika teny eo no ho eo: Smartphone na fitaovana hividianana
Modely 3D ao amin'ny Google misy effets AR (toerana, planeta ary vatan'olombelona)
Ahoana ny fomba hanokafana tsara ny rakitra CSV
Ahoana ny fanitsiana ny fikirakirana webcam (mifanohitra sy ny famirapiratana) amin'ny PC Windows
Ahoana ny fomba hidirana amin'ny Zoom rehefa mahazo fanasana ianao
Miseho amin'ny fihaonambe video miaraka amin'ny avatar 3D izay mihetsika toa antsika
Ilay rahona maimaim-poana tsara indrindra hitehirizana rakitra amin'ny Internet
Manampia fitsipika eo amin'ny efijery PC
Miova fo ny MKV amin'ny AVI na Burn MKV amin'ny DVD
Mamorona sary manara-penitra sy sary 360 degre amin'ny Internet sy amin'ny PCo
Afangaro ny mozika amin'ny PC miaraka amin'ny fandaharana DJ maimaim-poana
Tombony ny solosaina PC anao: wallpaper miaraka amin'ny fakana sary, fakantsary 3D ary Widget
Mikroskopika 3D virtoaly amin'ny Internet ary maimaimpoana maimaim-poana amin'ny solosainao
Visio alternatives hisarihana tabilao, famoronana flowcharts, diagram ary
Hanova ny horonan-tsary ho MP4 ho DVD ary DVD ho MP4
Tablette ho an'ny sekoly: iza amin'ireo no hofidina